अनदीको चामल पाउनै मुस्किल ! « Drishti News – Nepalese News Portal
अनदीको चामल पाउनै मुस्किल !
१५ भाद्र २०७६, आइतबार 12:22 pm
चितवन, १५ भदौं । तीजको लामो र निराहार व्रतमा भोक नलागोस् भन्नका लागि अघिल्लो रात दर खाने प्रचलन रहिआएको छ । दरमा खाने चीज आडिलो भएमा भोलिपल्ट दिनभर नाचगानमा रमाउन सकिने भएकाले दरमा अनदीको चामलको भात (लट्टे) खाने गरिन्छ ।
पहाडी समुदायमा लट्टे बनाउनका लागि प्रयोग गरिने अनदीको धान लगाउने प्रचलन कम हुँदै गएपछि चामलको अभाव हुन थालेको हो । पाइहालेमा पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । लामो समयदेखि चामल मिल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका द्वितीय उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीका अनुसार यस वर्ष अनदीको चामल प्रतिकेजी रु २२५ मा बिक्री भएको छ । आफूले प्रयोग गर्न राखेको धानबाट बढी भएर बिक्री गर्नेबाट पाएको थोरै चामल मात्र बिक्री गर्न पाएको सुवेदीले बताए ।
उनले भने, ‘थोरै थियो, किन्न चाहनेलाई पु¥याउन सकिएन ।’ हरेक वर्ष चामलको अभाव हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नं ३ का उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतम खाद्य उद्योगका सञ्चालक राजन गौतम आफ्नो मिलमा अनदीको चामल र धान बिक्री गर्न कोही नआएपछि बजारबाट खोजेर घरका लागि चामल किन्नु परेको बताउँछन् । उत्पादन कम हुने र अग्लो हुँदा हावाले ढाल्ने भएकाले धान लगाउने क्रम घटेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको वशिष्ठ तेल उद्योगका सञ्चालक कृष्ण भट्टराई चामल नपाएर बिक्री गर्न नसकेको बताउँछन् । पोखराबाट आएको चामल सकिएपछि खोज्दा पनि नपाएको उनको भनाइ छ । ग्राहकहरु आउने क्रम भइरहे पनि चामलको अभावमा फर्कनुपरेको उनले बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठले अनदीको धान लगाउने क्रम बर्सेनी घट्दै गएको बताउनुभयो । उन्नत जातको धान प्रतिहेक्टर छ टनसम्म फल्ने भए पनि अनदीको धान मुस्किलले दुई टन फल्ने भएकाले धेरै जमीन हुनेले घरायसी प्रयोजनबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लगाउन छाडेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा २९ हजार हेक्टरमा धान लगाउने गरिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ९७ हजार ४४० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क रहेको छ । चितवनमा मुस्किलले दुई प्रतिशत मात्र अनदीको धान लगाउने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्योमध्ये पनि धेरै थारू समुदायले चिचर बनाउन प्रयोग गरिने अनदी लगाउने गरिन्छ । लट्टेका लागि रातो अनदी प्रयोग हुन्छ भने चिचरका लागि सेतो अनदी प्रयोग हुने गर्दछ ।
श्रेष्ठले पुरानो जात भएकाले उत्पादन कम भएकै कारण कृषकले अनदीको धान लगाउन छाडेको बताउनुभयो । पछिल्ला वर्षहरुमा झण्डै एक महीनादेखि इस्टमित्र, आफन्त, साथीभाइ, कार्यालयका महिला कर्मचारीलाई दरको नाममा भोज खुवाउने प्रचलन बढेको छ । दरका लागि अनदीको चामलको माग बढेको भए पनि उत्पादन घटेपछि मूल्य आकाशिएको हो । रासस